WARARKA CAALAMKA | Radio Danan (DBN) 94 FM | Page 3
Dowladda Mexico oo sheegtay inay Tarxiili doonto ku dhawaad 500 oo qof oo muhaajiriin.
November 26, 2018	Comments Off on Dowladda Mexico oo sheegtay inay Tarxiili doonto ku dhawaad 500 oo qof oo muhaajiriin.
Mexico ayaa masaafurinaysa muhaajiriin xadka Maraykanka u talaabi rabay. ku dhawaad 500 oo qof oo muhaajiriin kuwaasi oo isku deyay inay xog uga gudban xadka dalkaasi u la wadaago Maraykanka ayee Dowladda Mexico sheegtay inay tarxiili doonto. War qoraal ah ...
4 skari oo Ku Geeriyootay Shil Diyaaradeed oo Ka Dhacay Magaalada Istanbuul.
November 26, 2018	Comments Off on 4 skari oo Ku Geeriyootay Shil Diyaaradeed oo Ka Dhacay Magaalada Istanbuul.
Afar askari oo Turkish ah ayaa geeriyootay, mid kalena waa uu dhaawacmay, ka dib markii diyaarad helicopter ah ay ku burburtay degmado ka tirsan Magaalada Istanbuul ee Dalkaasi Turkiga Istanbul, sida uu sheegay guddoomiyaha Magaaladaasi. Diyaaradaan helicopterka ahayd ayaa duulimaadyo ...
Britain oo loo ogolaadey in ay ka baxdo midowga Yurub.
November 25, 2018	Comments Off on Britain oo loo ogolaadey in ay ka baxdo midowga Yurub.
Iyadoo kal hore Dowladda Ingiriiska ay shaacisay ina isaga baxayso Midwoga yurub intiisa kale, ayaa waxaa arrintaas war xasaasi ah ka soo saaray Hogaamiyeyaasha Midowgaasi. Shir aan caadi ahayn oo maanta ay yeesheen Hogaamiyeyaasha Midowga Yurub ayaa waxa ay ku ...
Dadka Cudurka Ebola ugu Geeriyoonaya Dalka Congo oo Sii Kordheysa.
November 11, 2018	Comments Off on Dadka Cudurka Ebola ugu Geeriyoonaya Dalka Congo oo Sii Kordheysa.
Ilaa hadda inta la ogyahay tirada dadka u dhintay cudurka Ebola ee ka dillaacay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay gaarayaan 200 qof. Sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka. Mas’uuliyiinta caafimaadka waxay sheegeen in kala bar dadka uu soo riday cudurka ...
Dowladda Itoobiya oo sheegtay Xilliga dalkeeda Visa la’aan la gali doono.
October 28, 2018	Comments Off on Dowladda Itoobiya oo sheegtay Xilliga dalkeeda Visa la’aan la gali doono.
Dadka ka soo jeeda wadamada Qaaradda Africa ayaa loo ballan qaadey in Dalka Itoobiya Visa la’aan ay gali doonaan , 9-ka bisha November ee sanadkan ayay shaacisay Dowladda Itoobiya dhammaan dadyowga Afrikanka ah ee booqanaya Itoobiya aan laga dooneynin wax ...
Nin hubeysan oo 11 qof kudilay Dalka Mareykan ka.
October 28, 2018	Comments Off on Nin hubeysan oo 11 qof kudilay Dalka Mareykan ka.
Dalka mareykanka gaar ahaan magaalada Pittsburgh ayaa la soo sheegaya in 11 qof lagu dilay Macbad ay yahuudda kucibaadeysan jireen kadib markii nin hubeysnaa uu rasaas ladhacay dadkii kusugnaa macbadkaas. Ninkaan weerarka foosha xun geystay ayaa looga shakisan yahay Robert ...
Mareykanka Iyo Britain oo jaraya shirka dhaqaalaha ee Sucuudiga.
October 14, 2018	Comments Off on Mareykanka Iyo Britain oo jaraya shirka dhaqaalaha ee Sucuudiga.
Britain iyo Mareykanka ayaa la sheegayaa inay suuragal tahay in ay qaadacaan shirweyne dhaqaalaha iyo maalgashiga ku saabsan oo la filayo in bishan uu ka furmo dalka Sucuudiga, sababo la xirira arrinta weriyaha Sucuudiga u dhashay ee la la’yahay meel ...
Dad ku dhintay baraf ku soo dumay Buuraha Himilaaya.
October 13, 2018	Comments Off on Dad ku dhintay baraf ku soo dumay Buuraha Himilaaya.
Baraf ka soo daatay fiinta kore ee buurta Gurja ee ku taalla Galbeedka Dalka Nepal ayaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan 8 qofood ay ku naf waayeen kuwaa oo isugu jira dalxiisayaal u dhashay Kuuriyada Koonfureed iyo ku wa ...
Dilka wiil 15 jir ah oo xaalad kacsan abuurtay
October 4, 2018	Comments Off on Dilka wiil 15 jir ah oo xaalad kacsan abuurtay
Boqolaal mudaaharaadayaal careysan ayaa isugu soo baxay magaalada Gaza ee dalkaasi Falastiin kadib markii ciidamada Yahuudda ay toogasho ku dileen wiil 15 jir ah. Banaanbaxyadan oo aad u careysnaa ayaa tuuryo kubilaabay Booliiska waxaana ay ku qeylinayeen aan u aar ...
Feysal Cali Waraabe oo weerarary Muuse Biixi
October 4, 2018	Comments Off on Feysal Cali Waraabe oo weerarary Muuse Biixi
Hogaamiyaha xisbiga Mucaaradka Kulmiye ee Somaliland Eng Feysal Cali Waraabe oo khudbad kulul kahorjeediyay boqolaal dhallinyara ah ayaa si kulul u cambaareeyay maamulka madaxweyne Muuuse Biixi Cabdi. Waraabe ayaa sheegay in Madaxda Somaliland aysan awood buuxda u heysanin xalinta dhibaatooyinka ...
Page 3 of 1,768«12345	»	102030...Last »